Mgbawa bụ onye na-ebu eriri sekit agbakwụnye, nke a na-ekewa site na ọtụtụ wafers, ọ bụkwa okwu izugbe maka ihe ọkụkọ. Ihe mgbawa IC nwere ike iwekota ihe elektrọnik di iche iche na plate silicone iji mepụta okirikiri, ...
Site na mmụba ụgbọala na-aga n'ihu na mba anyị, nsogbu mmetọ gburugburu ebe obibi nke ikpochapu ụgbọala na-adịwanye njọ. N'ihi ya, gọvanọ na-agbasi mbọ ike ịkwalite ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ iji gbaa gburugburu ...
Kemgbe ntiwapụ nke COVID-19, ihe nkpuchi abụrụla ihe dị onye ọ bụla mkpa kwa ụbọchị. Otú ọ dị, nnukwu ọdịiche dị mkpa mere ka ụfọdụ ndị na-ere ahịa iwu na-akwadoghị jiri ya mee ihe, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe mkpuchi dị ala abanyela n'ahịa ahụ. Okwu metụtara "fake masks ...